War Murtiyeed - Anti Tribalism Movement : The ATM
Madasha Aqoonyahanka Aragtida Nool (MAAN) iyo Anti Tribalism Movement (ATM) ayaa si wadajir ah u qabtay dood cilmiyeed ku saabsan “Door ka dhallinyarada ee dib u dhiska dalka” 16, May 2015, Madasha waxaa isugu yimid dhallinyaro aqoonyahanno ah waxaa madasha lagu xusey dhallinyaradii hore doorkii ay ku la haayeen halgankii gobanimada iyo fursadaha ay haystaan dhalinyarada maanta iyo sida ay qayb uga noqon lahaayeen dib u dhiska dalka, waxaa mudnaan iyo tixgelin gaar ah la siiyey kaalintii ay ku lahaayeen dhallinyarada hirgelinta farta Soomaaliga.
Doodda waxaa si habsami leh loogu qodobeeyey la iskuna afgartey in la meel mariyo qodobada soosocdo:
In dib loo dhiso ururkii dhallinyarada qaranka si loo siiyo dhallinyarada muhiimad gooni ah isla markaana laga faa’ideysto awoodahooda, caqligooda, xoogooda, iyo maalkooda, isla markaana lala shaqeeyo dhammaan ururada daneeya arrimaha dhallinyaradda.
In la qabto shirwayne wada tashi ah oo looga arrinsanayo hawlaha dhalinyarada Soomaaliyeed.
In la helo madal cilmiyeysan oo dhallinyarada wacyigalisa una abaabulan ilaa iyo heer degmo, si dhallinyarada degmooyinka qebyb uga noqdaan wacyigalinta bulshada iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo dib u dhiska wadanka, shaqada, nadaafadda, nabadda iyo amaanka dalka. Madashaasi waxaa ay hagikartaa doodo cilmiyeysan oo lala wadaago dhammaan hey’adaha ka shaqeeya arrimaha dhallinyarada, xukuumadda iyo baarlamaanka.
In Hey’adaha dowladda iyo ganacsatada xil weyn iska saaraan kawada shaqeynta sidii loo heli lahaa hannaan fursad shaqo abuuris loogu sameynayo dhallinyarada taasoo lagu dhiirigelinayo kor u qaadista aqoontooda iyo xirfadooda.
In laga caawiyo wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga talooyinka ku aadan sida xaaladda dhallinyarada wax looga qaban karo.
In wasaaradda ka shaqeyso sidii stadium Muqdisho loo dayac tiri lahaa loogana dhigi lahaa xarun ay ka soo baxaan dhallin da’ yar oo isboortiga dalka sare u qaada.
In dhallinyarada ay ka fogaadaan qabyaaladda.
In dhallinyarada laga qeybgaliyo arrimaha masiiriga ah sida, dib u eegista dastuurka dalka.